म तिमीलाई माया गर्छु in English. म तिमीलाई माया गर्छु Meaning and Nepali to English Translation
Home>Words that start with I>I love u>म तिमीलाई माया गर्छु (Nepali to English translation)
What does म तिमीलाई माया गर्छु mean in English? If you want to learn म तिमीलाई माया गर्छु in English, you will find the translation here, along with other translations from Nepali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is म तिमीलाई माया गर्छु meaning in English:
तपाईं सस्ता केहि छ?
तपाईंले भन्नुभयो सही कुरा
म अविवाहित छु
म एउटा सन्देश लाग्न सक्छ?
म केहि किन्न चाहन्छु